सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो- डा. राजन भट्टराई | DNFMEDIA
सरकार निर्वाचनको तयारीमा जुटिसक्यो- डा. राजन भट्टराई
आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै डा. भट्टराईले भने,‘बहुमतप्राप्त प्रधानमन्त्रीले संविधानतः निर्वाचनको घोषणा गरिसक्नुभएको छ, वैशाख १७ र वैशाख २७ गते गरि दुई चरणमा निर्वाचन हुन्छ । निर्वाचन आयोग तयारीमा जुटिसकेको छ । सरकार तयारीमा रहेको छ । यद्धपी यो विषय सर्वोच्च अदालतमा विचारािधन अवस्थामा छ । अहिले नै यो हुन्छ भनेर भन्ने कुरा हुँदैन् । सरकार पूर्ण रुपमा निर्वाचनको लागि तयारीमा छ । निर्वाचन गर्ने काममा छ ।’
Previous: एकताबद्ध भई सबै समुदायलाई आन्दोलनमा लाग्न प्रचण्डको आग्रह
Next: आइएमई ‘भरोसा कोश’, चितवन अवस्थित आवेदकलाई वितरण शुरु